ဥရောပခွဲတမ်းအမျိုးမျိုးမှရရှိသော ၀ င်ငွေသည်ခံစားမှုရှိသလား။ - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
ဥရောပခွဲတမ်းမှအရစ္စတိုတယ်များမှ ၀ င်ငွေသည်ခံစားမှုရှိသလား။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 7, 2020 ဇြန္လ 8, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ ဘ‌‌လော့ခ်, စီးပွားရေး, မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်, အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ, အယ်ဒီတာရဲ့ Pick, Fixed ဝင်ငွေခွန်, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ
ကျနော်တို့မိတ်ဆက်ပေးဖို့စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ် ဥရောပ Dividend မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်။ ဤမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်အစုစုသည် ၀ င်ငွေမြင့်မားမှု၊ ခိုင်မာသောနိယာမကြီးထွားမှုနှင့်အနာဂတ်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်တိုးတက်မှုများကိုဖမ်းယူရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါ ဥရောပ Dividend မင်းမျိုးအနွယ်ဝင် အစုစုကိုအဓိကအားဖြင့်ကြီးထွားလာခြင်းနှင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသင်၏ဝင်ငွေတိုးပွားလာရန်ရှားပါးအလားအလာရှိပါတယ်။ ဥရောပရဲ့သို့ကွဲပြား များသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင် မြတ်များသည် COVID 19 ပြီးနောက်ဥရောပပြန်လည်ပတ်မှုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခိုင်မာသည့်ဝင်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာ - ဂျာမနီသည် COVID 19 ကပ်ရောဂါကြောင့်အကြီးအကျယ်ပြိုလဲပြီးနောက်သူတို့၏စီးပွားရေး (ဥပမာဂျာမနီ) သည်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည်။
Durig နောက်ထပ် Dividend Aristocrat တွင်လည်း, ရှိပါတယ် S & P 500 Dividend မင်းမျိုးအနွယ်ဝင် နှင့် ကနေဒါမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်.
အဓိကအမြတ်ဝေစု aristocrat အစုစုသည်ရှယ်ယာစျေးနှုန်းကျဆင်းမှုကြောင့်မကြာခဏဖြစ်ပေါ်သောအမြတ်အစွန်းအထွက်နှုန်းကိုဖော်ပြသည်။ စီးပွားရေးနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာသံသရာများ (နှင့် COVID ၁၉ ရောဂါကူးစက်မှုကြောင့်အလွန်အမင်းတိုးမြှင့်ခြင်း) သည်နှစ်များအတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသိသိသာသာတိုးတက်မှုနှင့်ကျဆင်းခြင်းများကိုဖြစ်စေသည်။ ဤအစုစုသည်အဓိကအားဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်း၊ အမြတ်ငွေပေးဆောင်ခြင်း၊ မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်ရှယ်ယာများကိုနှစ်စဉ်နှစ်ပေါင်း ၂၅ နှစ်ကျော်အမြတ်တိုးမြှင့်ခြင်း၏ထူးခြားသောမှတ်တမ်းများရှိသည့်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည်။
ရာစုနှစ်လေးပုံတစ်ပုံကျော်ခွဲဝေမှုကိုတိုးမြှင့်ရန်ရေရှည်အင်အားနှင့်အရင်းအမြစ်များကိုသရုပ်ပြနိုင်သည့်ကုမ္ပဏီများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည်မကြာခဏ COVID 19 အခြေပြုစွမ်းဆောင်ရည်အခြေပြုအချိန်ကာလအတွင်းပိုမိုမြန်ဆန်စွာတိုးတက်လာသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအမြောက်အများ၊ အထူးသဖြင့်အနာဂတ်အငြိမ်းစားယူရန်စီစဉ်သူများသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ရွှေနှစ်များအတွင်းပြီးသားသူများသည်၎င်းတို့၏ရေရှည်ကောင်းကျိုးအတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်သောကြောင့် ၀ င်ငွေမြင့်မားရုံသာမက ၀ င်ငွေစီးဆင်းမှုကိုပါရှာဖွေလိုကြသည်။
Randy Durig Durig ၏တည်ထောင်သူ။
ကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏အမြတ်များကို ၂၅ နှစ်ဆက်တိုက်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်ကိုသိရှိခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ကုမ္ပဏီများ၏ DNA ကိုပြောင်းလဲပြီးအမြတ်အစုရှယ်ယာပိုင်ရှင်ကို ဦး စားပေးရာတွင် (ပို၍ ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြင့်) အာရုံစိုက်သည်။ ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာဒီအရည်အသွေးကိုရှာဖို့ပိုခက်လာတယ်။ CEO နှင့် C suite ၏ပြtheနာများမှအစမိမိကိုယ်ကို ဦး စားပေးသောလစာ၊ လူမှုရေးဖိအားများ၊ အလုပ်အကိုင်များနှင့်အခြားသူများအထိများသောအားဖြင့်ကုမ္ပဏီအမြောက်အများတွင်ရှယ်ယာရှင်များအားအမြတ်အစွန်းများပေးငွေကိုအာရုံစိုက်စေသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ကုမ္ပဏီသည်မကြာခဏငွေပေးချေခြင်းနှင့်အမြတ်အစွန်းများကိုအဓိကမူဝါဒအနေဖြင့်၎င်း၏အဓိကအနာဂတ်အစီအစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ကြီးထွားလာခြင်းတို့ဖြစ်ခဲသည်။
Durig မှာဒီ "ဥရောပ Dividend မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်"ရေရှည်မဟာဗျူဟာချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည် S & P 500 Dividend မင်းမျိုးအနွယ်ဝင် နှင့် အဆိုပါ Dow ၏ခွေးငါတို့နှစ် ဦး စလုံးထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်မှာ Covid 19 ရောင်းအားများအတွင်းပင်ကြမ်းတမ်းသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနိုင်ခဲ့သည်။ ထည့်သွင်း၏တစ်ချိန်တည်းမှာ ဥရောပ Dividend မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်ကျနော်တို့ကဆက်ပြောသည် ဥရောပခွဲဝေခွေးများ အရာပိုမိုမြင့်မားမြတ်များအာရုံနှင့်ပြောင်းလဲနေသောပြန်လည်ညီမျှမှုရှိပါတယ်။
သက်သေပြထားသောဆယ်စုနှစ်တစ်ခု၏အောင်မြင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာများ၊ ယနေ့ထက်မြက်သောစျေးနှုန်းချိုသာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းစနစ်များနှင့်အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသည် ဥရောပ Dividend မင်းမျိုးအနွယ်ဝင် ပိုမိုလွယ်ကူခဲ့ဘယ်တော့မှခဲ့သည်။ Durig တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းချိုသာပြီးနှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများနှင့်အကျိုးအမြတ်များအပေါ်အခွန်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအားသာချက်များကိုပေးသောအစုစုကိုလွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူပါသည်။
Durig တွင်အထက်ပါကဲ့သို့အများအပြားခွေးတွင်လည်းရှိပါတယ် အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ.
အဆိုပါ ဥရောပ Dividend မင်းမျိုးအနွယ်ဝင် မကြာခဏအလွန်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအပြာရောင်ချစ်ပ်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်ကုမ္ပဏီများသည်ကြီးထွားလာပစ်မှတ် (မြတ်များတိုးတက်မှု၏ 25 နှစ်နှင့်အတူ) ။ ဤကုမ္ပဏီများသည်စုစုပေါင်းအမြတ်အစွန်းများစွာရရှိရန်မျှော်လင့်ထားသည့်အဓိကဥရောပချိန်းများတွင်အများအပြားစာရင်းဝင်သည်။
အဆိုပါ ဥရောပခွဲဝေခွေးများ အစုစုကိုရန်နီးစပ်သည် ဥရောပပိုင်းခြားထားသည်. ကျွန်တော်တို့ကိုဖုန်းခေါ်ပါနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခြားနားချက်ကိုရှင်းပြကူညီပေးပါမည်။
များစွာသော ၀ င်ငွေသည်ကြီးထွားမှုသို့မဟုတ် ၀ င်ငွေကိုထောက်ပံ့ရန်ဆိုသော်လည်း၊ မြတ်များတိုးတက်မှု၏ Aristocrat မှတ်တမ်းများအထင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်ကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ရွယ်တူချင်းများလုပ်ဆောင်ခြင်းမှထွက်ခွာသွားမှု၏အကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းများရှိသည်။
Durig ရဲ့လုပ်ပေးမသာ ဥရောပ Dividend မင်းမျိုးအနွယ်ဝင် အခြားမြောက်အမေရိက (သို့) အခြားပြည်တွင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများနှင့်ပေါင်းစပ်လျှင် ၀ င်ငွေတိုးပွားမှု၏ထူးခြားသောမှတ်တမ်းများကိုရရှိသည်။ ဥရောပစျေးကွက်များသည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံရေး၊ ငွေကြေးနှင့်ဘဏ်စနစ်များကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်ထူးခြားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အမေရိကန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအများစုအတွက်လိုချင်သော ၀ င်ငွေနှင့်တိုးတက်မှုအမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
European Dividend Aristocrat သည် Durig ၏ ၀ င်ငွေဖြေရှင်းနည်းများစုဆောင်းခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးထုတ်တစ်ခုဖြစ်သည် 4.5 ကျော်ပျမ်းမျှမြတ်များအထွက်နှုန်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားများအတွက်ထူးကဲသောအမျိုးမျိုးသောစွမ်းဆောင်ရည်များပေးနေချိန်တွင် ၀ င်ငွေတိုးနိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိသည်။ အစုစုသည်ထုတ်လုပ်ရန်အလွန်ရှားပါးသောအလားအလာရှိသည် ဝင်ငွေတိုးတက်မှု၊ နှင့် ကျောင်းအုပ်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်မှု အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဒီထူးခြားချက်သုံးခုကို Aristocrat ကုမ္ပဏီများနှင့်အတူကြီးမားသောအောင်မြင်မှုအစုံအလင်၏သမိုင်းကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည် ဥရောပ Aristocrats သူတို့ရဲ့သက်တူရွယ်တူတွေနဲ့ဆိတ်ကွယ်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ။
Durig ရဲ့ ဥရောပ Dividend မင်းမျိုးအနွယ်ဝင် သည်သင်၏ ၀ င်ငွေပန်းတိုင်သို့ရောက်ရှိရန်ကူညီရန်ရည်ရွယ်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အထောက်အကူပြုအဖွဲ့နှင့်အလွန်တန်ဖိုးနည်းသောဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥရောပမှအခွန်ရှောင်ခြင်းများသည်များသောအားဖြင့် ADRs (အမေရိကန်အခြေစိုက်အစုရှယ်ယာများနှင့်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ၏ခွဲဝေများ) ကို ၀ ယ်ယူနိုင်ခြင်းကြောင့်ပြanနာမဟုတ်ပါ။
သင်၌မေးခွန်းများရှိပါကသို့မဟုတ် Durig ၏ဥရောပ Dividend Aristocrat အကြောင်းထပ်မံသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ခေါ်ဆိုပါ ရေ at (971) 327-8847သို့မဟုတ် info@durig.com သို့အီးမေးလ်ပို့ပါ။
သည်အခြား Portfolio ရဲ့ Durig
ကျွန်ုပ်တို့၏ Fixed Income2(FX2) အစုစု၊ Dividend Aristocrats၊ Income Aristocrats Portfolio နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဗျူဟာများကိုခွေး Portfolios များနှင့်အခြား Charles Schwab မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံပေးများသို့သီးခြားအကောင့်များမှပေးသည်။
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: အတိတ်စွမ်းဆောင်ရည်သည်အနာဂတ်အောင်မြင်မှုအတွက်အရိပ်အယောင်မရှိပါ။ ဤသုံးသပ်ချက်တွင်တင်ပြသောအထွက်နှုန်းမြင့်နည်းဗျူဟာများ ရေ အားလုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအဘို့အသင့်လျော်မကျမည်အကြောင်းတည်း။ ဒါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံဥာဏ်မဟုတ်ပါဘူး ရေအာမခံဝယ်ယူရန်သို့မဟုတ်ရောင်းချရန်အတွက်တိကျသောထောက်ခံချက်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါ။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်သင့်တော်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်မချမီမှတ်ပုံတင်ထားသောပညာရှင်ထံမှတိကျသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်တောင်းခံသင့်သည်။ ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုသတင်းအချက်အလက်အတွက်သာရည်ရွယ်ပြီးအကြံဥာဏ်ပေးသည်မဟုတ်ပါ
မည်သည့်အထူးလုံခြုံရေးသို့မဟုတ်ဆက်စပ်ဘဏ္instrumentာရေးတူရိယာမှလေးစားမှုနှင့်အတူ။ ထိုသတင်းအချက်အလက်များကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အတွက်အခြေခံအဖြစ်အသုံးမပြုသင့်ပါ။ လိုင်စင်ရပရော်ဖက်ရှင်နယ်များထံမှအကြံဥာဏ်ရယူရန်အစားထိုးအဖြစ်မခံယူရပါ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခု၏သင့်တော်မှုသည်အချက်များစွာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဂရုတစိုက်စဉ်းစားသင့်သည်။ ယင်းအချက်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စွန့်စားမှု၊ လက်ရှိစျေးကွက်အခြေအနေနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ရည်ရွယ်ချက်များ၊
အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ မသေချာမရေရာသောကမ္ဘာတွင် ၀ င်ငွေတည်ငြိမ်မှုနှင့်အပြာရောင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာဖွေနေသူများအတွက် Durig ၏ဥရောပ Dividend Aristocrats Portfolio သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူအလားအလာရှိသောဖြေရှင်းနည်းကိုပေးနိုင်ပြီးကုန်ကျစရိတ်အလွန်နည်းပါးသည်။ ပိုမိုလေ့လာလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အား (971) 732-5121 သို့ဖုန်းဆက်ပါ (သို့) အီးမေးလ်ပို့ပါ info@durig.com.
သင်၏ဖုန်းကို hack လုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်နေပါသလား။